पढ्नु भयो १११ नेपाली पुस्तक, कुनै छुटे कि ? - Bijay Dimdong
A Journey is Victory
पढ्नु भयो १११ नेपाली पुस्तक, कुनै छुटे कि ?
८ चैत्र २०७६, शनिबार १८:३५ March 27, 2020 ८ चैत्र २०७६, शनिबार १८:३५ March 27, 2020
दैनिक जसो एउटा पुस्तक सार्वजनिक भएको खबर सामाजिक सञ्जालमा पढ्न पाइन्छ । प्रकाशनको गति यति धेरै भइसक्यो, ती सबैको खबर सार्वजनिक गर्न हरेक मिनेट अपडेट हुने अनलाइन पत्रिकाहरु पनि असमर्थ हुन थालेका छन् । यसबाट पुस्तक प्रकाशनको क्रम बढेको मात्र होइन, पठन संस्कृति पनि उकालो लागिरहेको अर्थ लगाउन सकिन्छ ।
बजारमा लेखकहरु सेलिब्रेटी हुँदै गएका छन् । र, लेखस्वले नै उनीहरुको गुजारा चल्न थालेको छ । केही समयअघि यो दिवास्वप्नजस्तो थियो ।यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली पुस्तकको गुणस्तर नपुगेको गुनासो बारम्बार आउने गरेको छ । नेपालमा नाम चलेका, चर्चित पुरस्कार पाइरहेका र वर्षका ‘बेस्टसेलर’ पुस्तकहरुलाई पनि खोट देखाउनु सामान्य चलन हुन थालेको छ । यस्ता आरोप पाठकहरुबाट कम स्वयं ‘लेखक वर्ग’ र ‘समीक्षक’हरुबाट बढी आएको देख्न सकिन्छ । पाठकहरुले सामाजिक सञ्चालमा रमाई-रमाई लेखक र कृतिहरुको प्रचार गरिरहँदा समीक्षकहरु भने ती पुस्तकका कमजोरी देखाउन उद्यत भइरहेका देखिन्छन् ।
पाठकहरुको यही द्विविधालाई अन्त्य गर्न अनलाइनखबरले तीनवटा प्रश्नावली तयार पारेर नाम चलेका लेखक, कवि, पत्रकार, समीक्षक र ढन्तेका रुपमा चिनिएका केही पाठकसँग उहाँहरुलाई मन परेका नेपाली पुस्तकको नाम टिपाइदिन आग्रह गरेका थियो । उहाँहरुबाट टिपिएका नामलाई विश्लेषणात्मक विधिबाट नेपाली पाठकले पढ्नैपर्ने १११ वटा पुस्तकको नाम यहाँ सार्वजनिक गरेका छौं ।
यो सर्वेक्षणको नतिजालाई हामीले अन्तिम मानेका होइनौं । सयौं वर्षको नेपाली साहित्यको इतिहासमा लाखौं पुस्तक लेखिएका छन् । यो भीडमा १११ वटा मात्रै उत्कृष्ट पुस्तक छन् भन्ने आशय कदापि होइन । यीभन्दा राम्रा पुस्तकको नाम छुटेको हुन सक्छ । ती पुस्तकको नाम कारणसहित प्रतिक्रिया कोलममा थप्न लेखक-पाठक स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । यो सर्वेक्षणमा हामीले पुस्तकलाई १० भागमा विभाजन गरेर हरेक क्षेत्रका ११ वटा उत्कृष्ट पुस्तक निकाल्ने प्रयास गरेका छौं ।
नेपाली इतिहास, समाज र परम्परासम्बन्धी धेरै पुस्तक राम्रोसँग लेखिएका छैनन् । जति लेखिए, विदेशी भाषामा र विदेशी लेखकले आफ्नै आँखाबाट लेखे । यहीअनुसार सामान्य प्रशासनिक नीतिदेखि देशको राजनीतिक परिवर्तनको आधार पनि विदेशी विज्ञ र उनीहरुको स्वार्थका आधारमा हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । नेपालको राजनीति, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था बुझाउन सक्ने धेरै पुस्तक लेखिएको रहेनछ भन्ने कुरा पुस्तकका लागि गरिएको सर्वेको नतिजाबाट देखिन्छ । यद्यपि, नेपालीमा त्यस्ता पुस्तक लेखिएकै छैनन् भन्नेचाहीँ होइन । विज्ञहरुले गरेको सिफारिसका आधारमा नेपाली भाषामा नेपाल बुझ्न पढ्नैपर्ने ११ वटा पुस्तकको नाम हामीले संकलन गरेका छौं । नेपाल बुझ्न यति कुरा पर्याप्त छ भन्ने होइन । तर, आजका पुस्ताले यी पुस्तक पढ्ने हो भने नेपालको एउटा सानो झलक राम्रोसँग पाउन सक्नेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
लेखिनुपर्ने धेरै राम्रा आत्मकथा संकोच र भोलिको पुस्ताले के भन्ला भनेर लेखिएनन् । अहिले त्यो सोच क्रमशः भत्किन थालेको छ । यद्यपि, यो पर्याप्त छैन । चर्चित लेखकको नाम हुनासाथ राम्रो आत्मकथा मान्न नसकिने सर्वेक्षणमा देखिएको छ । कतिपय सामान्य व्यक्तिका आत्मकथालाई समालोचक एवं पाठकहरुले उत्कृष्ट ठानेर सिफारिस गरेका छन् भने कतिपय चर्चित व्यक्तिका आत्मकथा सिफारिसमा परेका छैनन् ।
आजको पुस्तालाई सामाजिक सञ्जाल र युट्युब जेनेरेसन मानिन्छ । यो पुस्तालाई अत्यन्तै हतार छ र सबै कुरा रेडिमेट चाहन्छ । उनीहरु नेपाली पुस्तक पढ्नुभन्दा संसारभरका विषय एकै क्षणमा थाहा पाउन आतुर छन् । यही कारण हो, पाठ्यपुस्तकबाहेकका अन्य पुस्तक पढाउन निकै कसरत गर्नुपर्छ । यद्यपि, आजभोलि किशोर र युवापुस्तालाई केन्द्रमा राखेर धमाधम पुस्तक प्रकाशन हुन थालेका छन् । यीमध्ये आफ्ना सन्तानलाई कुन पुस्तक पढ्न दिने भन्ने अभिभावकमा दुविधामा देखिन्छ । समीक्षकहरुले युवा पुस्ताका लागि आकर्षक विषयवस्तु, सरल भाषा र अलिकति भए पनि सन्देश लुकेका पुस्तक किशोरहरुले पढ्नुपर्ने बताउँदै त्यस किसिमका पुस्तकलाई सिफारिस गरेका छन् ।
साहित्यमा महिला वा पुरुषले पढ्नुपर्ने पुस्तकका रुपमा विभाजन गर्ने चलन छैन । यद्यपि, साहित्यमा खासै रुचि नभएका महिलाहरु नयाँ स्वादका पुस्तक पढ्न रुचाउँछन् भन्ने न्युयोर्क टाइम्सले बर्सेनि सार्वजनिक गर्ने सूचीबाट थाहा हुन्छ । यस्ता सूचीमा साहित्यभन्दा ‘चिकेन सुप फर सोल’जस्ता पुस्तक लाखौं प्रति बिक्री भएको देखिएको थियो । यही आधारमा साहित्यमा रुचि हुने र नहुने दुवै खालका महिलाका लागि विज्ञहरुले निम्न ११ वटा पुस्तक सिफारिस गरेका छन् ।
यो शीर्षकअन्तर्गत् हामीले नेपालका चर्चित साहित्यकारसँग पढ्नैपर्ने साहित्यिक कृतिको नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरेका थियौं । हाम्रो आग्रहमा नेपालमा विश्वस्तरका कुन-कुन कृतिहरु छन् भन्ने प्रश्न पनि समावेश थियो । खगेन्द्र संग्रौला, अमर न्यौपाने, बुद्धिसागर, अविनास श्रेष्ठ, विप्लव ढकाल, राम लोहनीजस्ता चर्चित साहित्यकार एवं समीक्षकहरुलाई हामीले आफ्ना पाठकलाई पढ्नैपर्ने पुस्तकको नाम लिइदिन आग्रह गरेका थियौं । यस्ता २० जना लेखक-समीक्षक एवं केही पाठकबाट प्राप्त पुस्तकका आधारमा थप कृतिहरुको नाम यसरी सिफारिस भएर आएका छन् ।
७) ऐना- रामलाल जोशी
By: yourbijay info & education
My Name is Bijay Dimdong, professionally I amasoftware Engineer and WordPress web developer. I work with honor and integrity. I guarantee quality work and lifetime support. I can develop & design any kind of website as well as fix, tweak, or optimize your WordPress website. Let’s work together.
Theme: Bijay Blog by Lhotse Themes.